Land for Sale in Mingaladon - Yangon Region | iMyanmarHouse.com
Lands for Sale in Mingaladon
မြေကွက်​အ​ရောင်း °°°°°°°°°°°°°°° ​မြေကွက်​အကျယ်​ ...
Ad Number S-7045962
Ad Number S-7609818
Moon Poem Real Estate Service (Lucky Leaf Real Estate Service) Close
မင်ျဂလာဒုံ စကျမှုဇုနျ အနီး၊ အမှတျ ၃ လမျးမ အနီး၊ ဒေါနလမျး၊ ရကွေညျအိုငျ ရပျကှကျ မွကှေကျကယျြ...
Ad Number S-7608551
Ad Number S-7607297
SL17-001904, For Sales Land, အမှတ် (၇) လမ်းမ၊ မင်္ဂလာဒုံတွင် မြေကွက်ရောင်းရန်ရှိပါသည်။
Ad Number S-7604263
Ad Number S-7596861
Ad Number S-7578732
Ad Number S-7575981
(SL16-002094),For Sale,Zay Kabar Win,Mingalardon Townshipတွင်မြေကွက်ရောင်းရန်ရှ်ိသည်။
19,602 Lakh (Kyats)
Ad Number S-7575224
Ad Number S-7530261
SL17-001904, For Sales Land, အမှတ် (၇) လမ်းမ၊ အမှတ်(၂) နှင့် အမှတ်(၃) လမ်းအနီး မင်္ဂလာဒုံတွင်...
Ad Number S-7530258